Cagaarka isbedelka cimilada Antarctica | Saadaasha Shabakadda
Cagaarka isbedelka cimilada Antarctica
Way adag tahay in la qiyaaso in qaarad qabow sida Antarctica, oo ah meesha laga diro heerkulka ugu hooseeya meeraha, ay yeelan karto isku-uruurid ballaaran oo dhir ah, sax? Laakiin isbeddelka cimilada ayaa sidaas u oggolaanaya. Nus qarnigii la soo dhaafay waxqabadka noolaha ayaa kordhay, sida lagu sheegay daraasad lagu daabacay joornaalka 'Biology Current'.
Qaaraddu ma cagaar bay isu rogi doontaa sidii ay ahayd 52 malyuun sano ka hor?
Daraasaddan, oo ay fuliyeen koox saynisyahanno ah oo ka socda jaamacadaha Exeter iyo Cambridge (UK), iyo sidoo kale British Antarctic Survey, waxay soo jeedinaysaa in fikradani aysan ahayn mid fog oo sidii ay ahayd ilaa bilowgii Kacaankii Warshadaha bini aadamkuna wuxuu bilaabay inuu saameyn weyn ku yeesho deegaanka.
Sanadkii 2013, koox cilmi baarayaal ah ayaa diirada saarey falanqeynta xudunta moss laga helay koonfurta fog ee jasiirada Antarctic. Kadib waxay ogaadeen in isbadal weyn oo xagga bii'ada ah uu dhab ahaan socdo. Hadda, Markii la falanqeynayo shan aag oo kale, waxaa la xaqiijiyay in tani ay tahay isbedel guud.
Antarctica waa mid ka mid ah meelaha sida weyn looga dareemay saameynta isbedelka cimilada. Heerkulku wuxuu kordhay qiyaastii 0,5ºC tobankii sano ilaa 1950. Haddii tani sii socoto, sida barafku u dhalaalayo waxaa jiri doona dhul badan oo bilaash ah, sidaa darteed waxay u badan tahay inay noqon doonto gobol aad u cagaar badan mustaqbalka.
Waqtigan xaadirka ah, nolosha dhirta qaybtan adduunka kaliya waxay ka jirtaa qiyaastii 0,3% qaaradda; Si kastaba ha noqotee, isbedelka cimilada ayaa cagaar ka dhigeysa. Maxaa dhici kara mustaqbalka? Si loo ogaado, cilmi baarayaashu waxay baari doonaan diiwaanada bayooloji ee soo jiray kumanaan sano. Markaa way ogaan karaan sida isbeddelka cimilada u saameeyay waagii hore.
Hadaad rabto inaad waxbadan ogaato, dhagsii Halkan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Isbedelka Cimilada » Cagaarka isbedelka cimilada Antarctica
Boorka saxaraha Gobi ayaa go’aamiya tayada hawada Shiinaha